ကဗျာဆရာတို့ အားဖိတ်ခေါ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကဗျာဆရာတို့ အားဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Nov 10, 2010 in News | 19 comments
အမိမဆုံးမသော သားသမီးတို့ သည် နှုတ်သရမ်းကုန်ကြပြီး အဖ မဆုံးမသော သားသမီးတို့ သည် လက်သရမ်းကြကုန်၏ ဟု အဓိပ္ပါယ်ကို သက်ရောက်ပါစေသော မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဟူသော စကားသည်လော ဝေါဟာရသည်လော ဆိုရိုးသည်လော ထိုပါသော စာကြောင်းအား အနည်းငယ်မျှသာ စောဒကာ တက်လိုပါ၏။
မိဖ တို့ မည်သည် ရင်သွေးရတနာတို့ ၏ လက်ဦးဆရာဟူမူ ဆိုကြသည်ကိုလည်း မှားသည်ဟူ၍ မဆိုသာပေ ရံခါတွင် ယဉ်ကျေးခြင်း ရိုင်းပြခြင်း ဟူသော အပြုမူသည် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ကံ တရားတို့ နှင့်လည်း အဆက်အစပ်ရှိလှသည် (ဆင်ခြင်တုံတရား ဟူသော ဉာဏ် မရှိနိုင်ခြင်း) ဆိုသောအခါ ဘာသာတစ်ရားတို့ ကို အကြောင်းပြု၍ သဘောထားကွဲလွဲကုန်ကြသည့် အရေးသည် သဘောထား သိမ်ငယ်သူတို့အကြောင်းဟုသာ ကျွန်ုပ်ဆိုပါမည်။
အလွန်ယဉ်ကျေးကုန်သော မိဖတို့ ထံတွင် လွန်စွာမလိမ္မာ ကုန်သော သားသမီး တို့ရှိတတ်ကြ၍ လွန်စွာ လိမ္မာကုန်သော သားသမီးတို့ ၏ မိဖတို့ သည် လွန်စွာ ရိုင်စိုင်း ကြပြီးလျှင် သားသမီးများနှင့် မလိုက်မဖက် ရှိတတ်ကြခြင်းကို ဟူသော လောက သဘော သဘာဝကို ဉာဏ်ပညာ အရာ၌ လွန်စွာပြည့်စုံကုန်သော ကျွန်ုပ်တို့ ၏ http://myanmargazette.net/ ရွာသူ ရွာသား (နပုံးပ/ဂေး/ဂန္ဒူး/လိင်တူချစ်သူ) များအားလုံး နားလည်ကြလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်မိပါတော့၏။
ဆိုခြင်သည်မှာ ငါ့၏အကြောင်းသည် အဖေအမေနှင့်မဆိုင် ရွာလူကြီးနှင့်မဆိုင် သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်းနှင့် မပတ်သက် ငါကြိုက်လို့ သောက်တဲ့ အရက် ငါလုပ်တာငါ့အပြစ် ဟု ခပ်တေတေ ပြောကြကုန်သော သူတစ်ချို့ ၏ အာဘော်ကို ကြားမိပါသောအခါ ဘာရယ်မသိ ပြုံးမိပြန်တော့သည်။ ထိုသူတို့ ကို အားကျသည်ဟု မဆိုသာသော်လည်း အကြာင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့သော် ထိုကဲ့သို့သာ မှတ်ယူကြလေကုန်လော့။
ကျွန်ုပ်အလွန် အထင်ကြီးသော သူတို့ တွင် ကဗျာ ဆရာအချို့ လည်းပါဝင်လေရာ ထိုကဗျာဆရာတို့ သည် လွန်စွာမှ တင်္ခနုတ်ပတ္တိဉာဏ်(ဖြတ်ထိုးဉာဏ်(သတ်ပုံရွှီးထားသှ်) ) ကောင်းကြကုန်ရာ ရေမလာမီးမလာ အင်တာနက်တို့ ပြတ်တောက် သည့်အကြောင်းတို့ကိုပင် ကဗျာများဖွဲ့ ၍ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ စာဖွဲ့ တတ်ကြကုန်ခြင်းကို လွန်စွာ အားကြမိပါခြင်းနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်သာ ထိုကဗျာဆရာတို့ ကဲ့သို့ကဗျာဖွဲ့ ဆိုတတ်ပါမူ ကောင်းလေစွဟူ သော အကြံစည်နှင့်တစ်ကွ သော၌တစ်ခါ ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ ရပါသော ဖြစ်အင်တစ်ခုအား အသို့ ကဗျာဖွဲ့ ရပါမူ ကောင်လေလိမ့်ဟုလည်း စိတ်ကူးယဉ်မိလေတော့သတည်း။
ကျွန်ုပ်အသက် ဆယ့်ရှစ်ဆယ့်ကိုး ခန့် ဟု ထင်မိပါသည် ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာ ရွာ၌ အရပ်စကားဖြင့်ဆိုသော် ကြပ်မပြေ့ သော ရူးနှမ်းနှမ်း အသက် လေးဆယ်ခန့်ခပ်ဝဝ ခပ်မဲမဲ မစိမ်းမေ ဟူသော အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက်သည်ရှိလျှင်ပြီး သူမသည် ဥစ္စာစောင့် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထားပြီး အလွန်လည်း ဒဏ္ဍာရီဆန်စွာ နေလေသည် (ငါနေတာ မြစိမ်းနန်းတော်မှာ မြစိမ်းရတနာတွေ မြစိမ်းအိပ်ယာ တလင်းတွေ ) မြစိမ်း မြစိမ်း စသည်စသည် ဖြင့် အရာရာအားလုံးကို တစ်မြစိမ်းတည်း မြစိမ်းရာမှ မမြစိမ်း ဟု အမည်တွင်ခြင်းထိပင်။ အကယ်စင်စစ် သူမ၏နာမည်ရင်းမှာ ခေတ်ပညာတတ် လူချမ်းသာတို့ ၏ မိသားစုဝင်ဖြစ်သည့်အလျှောက် မော်လီဌေး ဟု အမည်နာမ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ဘူးပါသော်လည်း မမြစိမ်း ဟူ၍သာ အမည်တွင်လျှက်ရှိပေတော့၏။
ကျေးရွာများဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ အတော်တန် ချမ်းသာခြင်းကြောင့် အဆိုပါ မမြစိမ်း တို့၏ ခြံကြီးသည် လွန်စွာကျယ်ဝန်းခြင်းရှိရကာ အိမ်ရှေ့စပါးနယ်သည့်တလင်းပြင်ဘေးတွင် ကွပ်ပျစ်ကြီးတစ်ခုလည်း ရှိလေပြီး အရှေ့လေတိုက်ချိန်တွင် ကွပ်ပျစ်ကြီးပေါ်၌ ထိုင်ကြလေလျှင် လေတစ်ဟူးဟူးဖြင့် အတော်လည်း လေကြောင်းတည့် သည့်သဘောတွင်ရှိလေသည်။
တစ်နေ့ တွင် ဖြစ်၏ ထိုကွပ်ပျစ်ကြီးပေါ်တွင် မမြစိမ်း သည် အစိမ်းရာင် စက္ကူပန်းများကို ပန်လျှက် အစိမ်းရောင် အင်္ကျီအစိမ်းရောင်ထမီ အစိမ်းရောင်ပဝါ နှင့်
အစိမ်းရာင် ခေါင်းအုံး အစိမ်းရောင် အောက်ခင်းဖျာ ပေါ်တွင် နှစ်ခြိုက်စွာ တစ်ခူးခူးဖြင့် အိပ်ပျော်လျှက်ရှိနေလေရာ အရှေ့ ဘက်ကို ခြေထောက်ဆင်းထားသည့်အလျှောက် လေတစ်ဟူးဟူး တိုက်ခပ်လိုက်စဉ် တစ်ခဏ၌ အခြေမလှဖြစ်ရကာ ထမီကြီး လန်သွားပါသော ဖြစ်ခြင်းကို မြင်မိပါသော ကျွန်ုပ်သည် ဤဖြစ်အင်ကို ကဗျာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ရေးဖွဲ့ ရပါမူ ကောင်းလေစွဟု ကြံစည်မိပါသော်လည်း ကဗျာသီဖွဲ့ ရာ၌ အရည်ချင်း မမှီဖြစ်ရကာ သင်သည်သာ ကဗျာဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ပါမူ အသို့ စာဖွဲ့လေလိမ့်မည်နည်း။
ဆရာပုကတော့ပွဲတောင်းနေလေရဲ့ ကျုပ်တို့ကတော့ကဗျာမစပ်တတ်ဘူးကဗျာဘဲဖတ်တတ်တာ ကိုနေဝင်းနီရေဘယ်လိုသဘောရလဲ..
Aunti Moe says:
အလွတ်ရနေတဲ့ စာချိုးလေး ချရေးပေးလိုက်မယ်.. အားလုံးဖတ်ဖို့..
အရသာ လျှာက သိသည်။
(ကဗျာအပိုင်း ၁ ဖြစ်ပါသည်။ အပိုင်း ၂ ကို စာဆိုတော်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု က ဆက်လက်တာဝန်ယူတင်ဆက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။)
ကွယ်ရာ ကျတော့ မေးငေါ့ဆဲ။
အဲဒီက စ တစ်ရွာလုံးက
စိမ်းဆိုမှ စိမ်းရက်သူကြီးရယ် မစိမ်းပင်ကြီး ရယ်။
ရေးလိုက်ပြီ ကိုဂျော်နီအောင်ပုရေ ခင်ဗျားရဲ့မမစိမ်းအကြောင်းကို ။
လေးပေါက် တော်တယ်နော် ကျနော်အားကျလိုက်တာ !!
ကိုပေါက်ရေးလိုက်မှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ် … ရွာသူရွာသားတွေကတော့ ဘယ်ကစမ်းစမ်းရတယ်နော် … တော်လိုက်ကြတာ ..
လိုရင်းတွေပျောက် တောတောင်ရောက် ….
ကာရန်မသိ စာမရှိ လက်မှိုင်ချပါဘိ …
ခုလို ကိုယ့်တွက်ကဗျာတွေကို ရေးပေးတဲ့
ကဂျာဆရာကြီးကို လွန်စွာကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနဲ့ 
မိမိမှာလည်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ 
ခပ်အေးအေးမနက်ပိုင်းလေးမှာ ကွေးကွေးလေးမှေးပြီး ရင်ထဲကနေ တိုးတိုးလေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဆိုနေမိပါတော့တယ်
ပုဝါကလည်းစိမ်းတယ် အင်္ကျီကလည်းစိမ်းတယ်
လေစိမ်းစိမ်းကြီး တစ်ချက်အဝှေ့ ဝယ်
မဲမဲကြီး တစ်ခု တွေ့ ပါတယ်ဗျ
(ပတ်ဝန်းကျင်ဖြင့် မအပ်စပ်သော် အနီကတ်ပေး၍ ဖျက်ကြလေကုန်)
ကိုပေါက်ကဗျာအတော်ကောင်းသဗျို့ ကိုအောင်ပုကြီးစလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းက ရွာထဲကလူတွေအားလုံးကဗျာဆရာတွေဖြစ်ကုန်ပါပေါ့လါးကွယ်တို့………
ကိုအောင်ပုရေ ခင်ဗျားကို ချစ်လွန်းလို့ 100တန်ကို 10နဲ့ ဒစ်စကောင့်ချပြီး ကော်မင်းပေးတာနော်။
အချစ်အတွက် အလျော့ခံလိုက်ရတဲ့ လေးပေါက်ပေါ့နော်…
အချစ်အကြောင်းပြောနေပုံထောက်တော့ သူတို့လဲ … ဟိုဒင်းတို့နဲ့ တဖွဲ့ထဲလားမသိဘူး …
ကဲ ဂျော်နီအောင်ရှည်ရေ…. အဲ ပုတာနဲ့ရှည်တာပဲကွာပါတယ်။ အဝေးရောက်နေတယ်လို့ မြင်မိလို့ တစ်ပုဒ်ရေးစပ်လိုက်ပါတယ် ရှာကြည့်လိုက်ပါနော်